Big City Small World (Series2Episode4- Save the Café!) - Myanmar Network
Posted by Myanmar Network on January 2, 2013 at 14:16 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
Series2Episode4- Save the Café! (အတွဲ (၂)၊ အပိုင်း (၄) – ကော်ဖီဆိုင်ကို ကယ်တင်ပါ!)
Series2Episode4- Save the Café ( < အသံဖိုင် download ရယူရန် ဝဲဖက်မှ link ကိုနှိပ်ပါ)
ကော်ဖီဆိုင်ဖွင့်ထားတဲ့ အဆောက်အဦးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုကို Sarah သိထားတယ်။ ဒါက ကော်ဖီဆိုင်ကို ကယ်တင်နိုင်ပါ့မလား?
ဟေး! ခင်ဗျားတို့ အုပ်စု ဘာလုပ်နေတာလဲ? အဲ့ဒါက ဘာလဲ?
နဖူးစည်းစာတမ်းလေ – ကြည့်! ဘာရေးထားလဲတွေ့လား…
ကော်ဖီ...ဆိုင်ကို...ကယ်ပါ.. အော်၊ သိပြီ၊ အရမ်းကောင်းတာပဲ ဒါက ဒီဆိုင်ကို မပိတ်အောင် တားနိုင်မယ်လို့ ထင်လား?
အင်း၊ မသိနိုင်ဘူးလေ။ ဘာလေးဖြစ်ဖြစ် အထောက်အပံ့တော့ ရတာပေါ့
ဟင်း၊ ငါ့ ကော်ဖီဆိုင်ရှေ့မှာ ဒါကို ကပ်ထားလို့ ဘာမှ ပြောင်းလဲသွားမယ်လို့ မထင်ဘူး
အော်၊ ပြောင်းလဲမှာပါ Tony ရယ်။ အကောင်းမြင်ပါ! ဒေသခံ သတင်းစာက ကျွန်မသူငယ်ချင်းက ဓါတ်ပုံလိုက်ရိုက်လိမ့်မယ်၊ ကျွန်မကလည်း ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ရေးမလို့!
ဒီမှာ Tony – ကျွန်မတို့ လုပ်နိုင်တာဆိုလို့ ဒါပဲရှိတယ်။ ဒီမှာ ကျွန်မတို့အနေနဲ့ လှုပ်ရှားမှု တစ်ခု ကို စီစဉ်ပြီး တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ Sarah ကလည်း အလုပ်အချို့ လုပ်နေတယ်...
၀ိုး! နဖူးစည်းကို ကြည့်လိုက်ပါဦး! အရမ်းကို အထင်ကြီးစရာပဲ!
ဟိုင်းပါ Magda ရေ!
ကဲ ဒါဆိုရင် ပြောပါဦး အလုပ်လက်ခံဖို့ စိတ်ကူးလိုက်ပြီလား?
အင်း… ငါဒီအလုပ်ကို လက်ခံမှဖြစ်မယ်… ငါဆိုလိုချင်တာက၊ တကယ်လိုချင်တာပါ… အလုပ်ကကောင်းတယ်လေ။ ပြီးတော့ ဗိသုကာလုပ်ငန်းမှာ အလုပ်ကောင်းကောင်းရဖို့ဆိုတာ ခက်တယ်။ ပြီးတော့ ငါပိုက်ဆံလည်းလိုအပ်နေတယ်
ကျွန်မနဲ့ Sarah နေတဲ့ Johnny ရဲ့ တိုက်ခန်းဟောင်း... အဲ့ဒါက ကောင်းပေမယ့် ဈေးကြီးတယ်လေ...
ဒါပေမယ့် နင် ငါတို့ကို ကူညီနိုင်မှာပါ..
ဟုတ်တယ်။ Tony ရဲ့ ကော်ဖီဆိုင်နဲ့ Olivia ရဲ့ ဆိုင်ကို ဖြိုချချင်နေတဲ့ ကုမ္ပဏီမှာ အလုပ်လုပ်နေမှတော့ နင် တစ်ခုခုတော့ လုပ်နိုင်မှာပါ
အင်း၊ သိပ်တော့ မသေချာဘူး... ဒါပေမယ့် ကြည့်သေးတာပေါ့
ဒီနေ့ Sarah ရှိလား?
အင်း၊ အခုထိတော့ မရောက်သေးဘူး... ဒါပေမယ့် မကြာခင်လာမယ်လို့ ပြောပါတယ်...
အော်ကောင်းပါပြီ။ ကျွန်တော်သူ့ကို စောင့်လိုက်မယ်လေ။ ဒီမှာ ထိုင်လို့ရမလား?
အဲဒိတော့ ရှင်က စားဖိုမှုးဆိုတာ အမှန်ပဲလား?
အတိအကျတော့ မဟုတ်ဘူး... ကျွန်တော်က စားဖိုမှုးဖြစ်ချင်တာ။ အဲ့ဒါက ကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တာပါ အခုတော့ ကျွန်တော်က အစားအစိာကို စီစဉ်သူ တစ်ယောက်ပါ... အဲ့ဒါက မတူဘူး...
အစားအစာ စီစဉ်သူဆိုတာ ဘာလဲ?
အစားအစာ စီစဉ်သူဆိုတာက လူအများကြီးအတွက် အစားအသောက် ချက်ပြုတ်ပေးရတယ်။ ဘေးက ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းခွင်က အလုပ်သမားတွေအတွက် နေ့လည်စာ ချက်ပြုတ်ပေးရတာ်။ အဲဒါကတော့ အသားညှပ်ပေါင်မုန့်နဲ့ စွတ်ပြုတ်ပါပဲ။ ဒါမှမဟုတ်လည်း တစ်ခြားလွယ်ကူတဲ့အရာပေါ့။ အတော်လေးငြီးငွေ့ဖို့ကောင်းတယ် – ကျွန်တော်က စိန်ခေါ်မှုကို ပိုကြိုက်တယ်!
အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ! မင်္ဂလာပါ Carlos!
ဟိုင်းပါ Sarah! ပြန်တွေ့ရတာ ၀မ်းသာပါတယ်…
Carlos က အခုပဲ သူ့အလုပ်အကြောင်းပြောနေတာ...
မဟုတ်ပါဘူး... ဒါပေမယ့် ငါက စားဖိုမှုးဖြစ်ချင်တာ!
ဘရာဇိးကပါ! ဘယ်သူမှ မယုံဘူးဆိုရင်တောင်ပေါ့လေ…
ဘာကြောင့် ရှင့်ကို ဘရာဇီးက မဟုတ်ဘူးလို့ လူတွေ ထင်တာလဲ?
ကျွန်တော်က ဘောလုံးကိုမကြိုက်ဘူးလေ ပြီးတော့ မကတတ်ဘူး…
ဒီမှာ – ကျွန်မတို့မှာ အရေးကြီးတဲ့အလုပ်လုပ်ဖို့ရှိတယ်... ဒီကော်ဖီဆိုင်နဲ့ Olivia ရဲ့ ဆိုင်ကို ကယ်ကြရမယ်။
ပြီးတော့ ကျွန်မကလည်း ဒေသခံ သတင်းစာအတွက် ဆောင်းပါးရေးနေတယ်...
ကောင်းတယ်... ပြီးတော့ ကျွန်မကလည်း စိတ်ဝင်စားစရာ အကြောင်းအရာတစ်ခုကို တွေ့ခဲ့တယ်...
အင်း၊ ကျွန်မမှာ ဒေသခံ ပြတိုက်မှာ အလုပ်လ်ုပနေတဲ့ သူငယ်ချင်းရှိတယ်ဆိုတာ သိကြတယ်နော် – Carlos ရေ ကျွန်မက ပြတိုက်တွေနဲ့ အနုပညာပြခန်းတွေကို လျှောက်သွားရတာ ကြိုက်တယ်လေ – သူမက ကျွန်မကို အရေးကြီးကောင်းကြီးနိုင်တဲ့ အကြောင်းအရာ တစ်ခု ပြောပြလိုက်တယ်...
ဒီအဆာက်အဦးတွေ – ကော်ဖီဆိုင်နဲ့ နင့်ဆိုင်ပေါ့ – အဲ့ဒါတွေက လူအများထင်ထားတာထက် ပိုပြီးတော့ အိုတယ်…
အင်း။ သူတို့တွေက နှစ်ပေါင်း ၂၀၀ လောက်တောင် ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်…
Tony! ရှင်အဲ့ဒါကို ကြားလိုက်လား?
Sarah က ကော်ဖီဆိုင်နဲ့ ကျွန်မဆိုင်ဟာ တကယ်တော့ အဆောက်အဦး အိုကြီးတွေဆိုတာ သိလာတယ်...
ဒါကြောင့် ခေါင်မိုးမှာ ပြဿနာရှိနေတာပေါ့၊ ဒါဆိုရင်...
ဒါဆိုရင် သူတိုပ ဒီအဆောက်အဦးတွေကို ဖြိုချင်တိုင်း ဖြိုလို့မရတော့ဘူး!
ဟုတ်တယ်။ သူတို့က သမိုင်းဝင် တန်ဖိုးရှိတယ်
ဒါက သူတို့ကို မတားနိုင်ပါဘူး
အို Tony ရယ် နည်းနည်းပိုပြီး အကောင်းမြင်သင့်တယ်! အကောင်းဘက်ကိုပဲ ကြည့်သင့်တယ်!
ငါက အကောင်းဘက်ကို မမြင်တာ...
ကျွန်မတို့ လှုပ်ရှားမှုကြီးတစ်ခု လုပ်ကြမယ်။ ဒါက ကုမ္ပဏီကြီးတွေ သူတို့ လုပ်ချင်တာ မလုပ်ရအောင် လူတွေက ဘယ်လို တားဆီးနိုင်တယ်ဆိုတာကို ပြလိမ့်မယ်!
Permalink Reply by thant zin tun on January 2, 2013 at 16:02
Permalink Reply by UMyo Min on January 2, 2013 at 17:26
Permalink Reply by Soe Soe on January 2, 2013 at 21:38
Permalink Reply by Yin Min Myint Z∂w on January 3, 2013 at 21:31